पहिराले बन्दीपुरमा ६ घर ब’गायो, पहिरोमा पु’रिएर ऋषिङमा एक बेपत्ता - dautarimedia.com
पहिराले बन्दीपुरमा ६ घर ब’गायो, पहिरोमा पु’रिएर ऋषिङमा एक बेपत्ता
विरल वर्षासँगै आएको प’हिरोले बन्दीपुर गाउँपालिकामा आज ६ घर ब’गाएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–२ खहरेमा पहिराले ६ घर ब’गाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिनुभयो ।
घर बगाएपनि मा’नवीय क्षति भने छैन । प’हिरोको उच्च जो’खिममा रहेपछि यस अगाडी नै स्थानीयवासीले घर छा’डिसकेका थिए । उनीहरु हाल शिशु स्याहार केन्द्रमा बसिरहेका छन् । “पहिलै उच्च जो’खिममा रहेपछि उहाँहरुलाई शिशु स्या’हार केन्द्रमा सा’रेका थियौ,” थापाले भन्नुभयो ।
यसैगरी पहिरोले बन्दीपुर–डुम्रे सडकखण्ड पनि अ’वरुद्ध भएको छ । गत बुधबारको पहिरोले अ’वरुद्ध भएको सडक केही दिन अगाडी सुचारु भएपनि पुनः अ’वरुद्ध भएको हो ।उता अविरल वर्षा पछि आज बिहान गएको पहि’रोका कारण ऋषिङ-८ म’झकोटमा एक व्यक्ति पु’रिएका छन् ।
यसरी पु’रिनेका गाउँपालिकाका सु’रक्षागार्ड खुमबहादुर आले छन् ।बिहान गोबर सो’होर्न गएका उनलाई गोठमाथिबाट आएको प’हिरोले पु’रेको बताइएको छ ।उनको अवस्था अ’ज्ञात रहेको छ । अहिले स्थानीय र जन प्रतिनिधिको सक्रियतामा खोजी कार्य भइरहेको सहकर्मी दानबहादुर श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
यहि ड’रले श्रीमतीलाई भन्दा बढि समय साथीभाईलाई दिने गरेको पाईन्छ । पुरुष स्वाभिमान भनेको आफ्नी स्वा’स्नी संग नझुक्नु हो र ? श्रीमतीको महत्वलाई प्रेम गरेर सकेजति माया र साथ दिनेहरु पो पुरुष । एउटी नारीको मनमा बस्न पाउनुनै पुरुषको ठुलो भाग्य हो, उसले
Previous: रहस्यमय बन्दै टिकापुर घटना!!exclusive vedioयो बच्चाले कस्को के बिगार्यो सरकार उत्तर चाहियो जनतालाई
Next: स्टुडेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया पुगेकी एलिजा भन्छिन- छोराछोरीलाई अष्ट्रेलिया नपठाउनुस्, नेपालमै बिजनेस गर्न प्रोत्साहन गर्नुस्